Ulwakhiwo lwesinyithi China Isakhiwo sentsimbi yentsimbi Abaxhasi, Umzi mveliso
I-brace yentsimbi ilulungele uphahla kunye nemiqadi yodonga yobunjineli bobume bensimbi. Ukolulwa ngokubanzi kubhekisa kwisinyithi esirhangqileyo esidibanisa iiplins zentsimbi, okt imivalo yentsimbi erhabaxa, ukomeleza uzinzo lweeplins kunye nokwenza iipllinin zithambekele ekungazinzini nasekonakaleni phantsi kwemikhosi ethile yangaphandle. Kukho ii-braces ezi-diagonal (okt i-45-degree-bending at the screw thread) kunye ne-brace echanekileyo (okt yonke iqonde). Emva konyango olushushu lwe-galvanizing, ukusebenza kwe-antirust kuyenzeka.
Izikhonkwane zentsimbi zezinto zokubopha ezinamandla aphezulu kunye nokuqina. Izikhonkwane ze-Welding zifutshane kwizikhonkwane ze-cylindrical welding for arc stud welding. Izikhonkwane zokuwelda zinobubanzi obuqhelekileyo nom 10 ~ Ф 25 mm kunye nobude obupheleleyo ngaphambi kokudibanisa yi-40 ~ 300 mm. Izikopu zeSolder zinophawu lokuchonga lomenzi olwenziwe ngabalinganiswa be-convex kumphezulu wentloko. Izikopelo zeSolder zisetyenziswa ngokubanzi.
I-bolt enkulu yehexagon yesakhiwo sensimbi
Isakhelo sesinyithi yentsimbi luhlobo lwebholiti yamandla aphakamileyo kunye nohlobo lwenxalenye esemgangathweni. Ulwakhiwo lweebholtshi zesinyithi zisetyenziswa ikakhulu kubunjineli bobume bentsimbi ukudibanisa amanqaku oxhulumaniso lweepleyiti zentsimbi. Iibholiti ezinkulu ezinamacala amathandathu amakhulu ezomgangatho ophezulu wezikhonkwane eziqhelekileyo. Intloko enamacala amathandathu iya kuba nkulu. I-bolt enkulu enamacala amathandathu ezakhiweyo ine-bolt, nut kunye neewashi ezimbini. Ngokubanzi 10.9.